30 best high paying jobs for teens - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 30ka shaqo ee ugu mushaarka badan ee dhalinyarada
30ka shaqo ee ugu mushaarka badan ee dhalinyarada
Waxaa jira waxyaabo badan oo ay dadku u maleynayaan inay ka dhigayaan kuraynimada mid weyn. Dhallinta maanta ayaa la filayaa in ay bannaanka u baxaan oo ay shaqo helaan in kasta oo aysan qaan-gaarin in ay codeeyaan oo aysan haysan lacag badan oo iyaga u gaar ah.
Inkasta oo ay jiraan fursado ku filan oo uu kuraygu ku dhici karo rafaadka, waxa kale oo jira fursado badan oo uu kuraygu ku guulaysan karo.
Dhallinta qorsheynaysa inay galaan kulliyadda ama rajaynaya inay galaan shaqooyin mushahar sare leh, maaha wax aan caadi ahayn inay isku dayaan inay helaan lacag jeeb ah oo dheeraad ah oo tafaariiqda ah ama kabalyeeri ama adeege ahaan. Si kastaba ha ahaatee, shaqooyinka meelahaas ka jira maaha kuwo caadi ah sidii ay ahaan jireen; Dad badan ayaa hadda ka shaqeeya guriga ama hawshooda si toos ah ayey u shaqeeyaan.
Maxay dhalintu u raadsan karaan shaqooyin mushaar sare leh?
Shaqooyinka Dhallinta Ugu Mushaarka Badan
1. Naqshadeeyaha Shabakadda
2. Naqshad Sawireed
3. Xayawaanka Fadhiga
4. Ilmaha haynta
5. Socodka Ey
6. Fadhiga Guriga
7. Landscape Gardening
8. Kaaliyaha Dhismaha
9. Golf Caddy
12. Sahanka Onlineka ah ee Lacagaha lagu bixiyo
13. Tifatiraha Fiidiyaha
14. Garsooraha Ciyaaraha Dhalinyarada
15. La taliyaha deegaanka
16. Huteelka Guriga
17. Bixinta Cunnada
18. Rinjiyeha Guriga
22. Shuraakada iibka
24. Badeecadaha tafaariiqda
25. Automotive technician
26. Library assistant
28. Kennel assistant
29. Kala-soocida xirmooyinka
30. Shaqaalaha tiyaatarka filimada
Su'aalaha inta badan la iska weydiiyo ee ku saabsan 30 ka shaqo ee ugu mushaarka badan ee loogu talagalay dhalinyarada
Inaad hesho shaqo mushahar sare leh oo dhallinyaranimada ah waxay kuu oggolaanaysaa inaad wax ku biiriso kharashka kulliyadda, tani waxay kugu beeraysaa adkaysi iyo kalsooni aad u baahan tahay si aad ugu guulaysato xirfadahaaga.
Shaqooyinka loogu talagalay da'yarta bixiya mushaharka celceliska ka sarreeya waxay ku siin karaan waayo-aragnimada loo baahan yahay si ay u helaan shaqooyin mushahar fiican leh hadhow xirfaddaada.
Sidaa darteed, shaqooyinka mushaharka badan laga helo ee ku jira CV-gaagu waxay muujinayaan inaad dedaal, hindise, iyo wakhti galisay shaqo ugaadhsiga iyo tababarka naftaada, oo aad leedahay adkaysi, kalsooni, iyo adkeysi shaqada dhabta ah.
Akhri: Hadii aan helo InjShaqada Ma la Iga bixiyaa? Shilalka Shaqaalaha
Mushaharka celcelis ahaan: $ 18 saacaddii
Naqshadayaasha shabakadaha iyo horumariyayaashu waxay naqshadeeyaan oo u dhisaan macaamiisheeda mareegaha. Nashqadayaasha shabakadu waxay la shaqeeyaan macaamiisha si ay u hubiyaan in nuxurka, socodka, iyo soo bandhigida mareegaha ay ka tarjumayaan oo ay taageeraan ganacsiga.
Marka ay dhisaan goobahooda, dhallinyaradu waxay si degdeg ah khibrad ugu heli karaan mashaariicda horumarinta shabakadda. Dhalinyaradu waxa kale oo ay isticmaali karaan agab tababbarka khadka bilaashka ah si ay u dhistaan ​​xirfado ama uga shaqeeyaan goobo fudud iyaga oo isticmaalaya goobo ay ka mid yihiin Squarespace ama WordPress.
Waxay u soo bandhigi karaan inay u dhisaan shabakado jeesjees ah oo loogu talagalay saaxiibada ama qoyska, ama inay la xiriiraan meheradaha maxalliga ah si ay uga caawiyaan websaydhka.
Mushaharka gelitaanka: $15 saacaddii
Abuuritaanka garaafyada waxay u baahan tahay xoogaa farshaxan farshaxan, aqoon farsamo, iyo badiyaa qalab qaali ah iyo software. Si kastaba ha noqotee, hadda waxaa jira ilo badan oo tababbarka naqshadeynta garaafyada bilaashka ah iyo xirmooyin software-ku-saleysan, markaa ma jirto wax caqabad ah oo dhallinyaradu ku tababaranayaan internetka.
Nashqadeeyayaasha garaafyada waxay abuuraan calaamado, boodhadh, mareegaha iyo macluumaadka warbaahinta bulshada ee shirkadaha ama shakhsiyaadka si ay u taageeraan magacyadooda iyo ololayaasha suuqgeynta. Naqshadeeyaha garaafyada doorkiisa ugu weyn waa inuu abuuro muuqaal joogto ah, cad, oo soo jiidanaya shirkad.
Celceliska mushaharka: $12 ilaa $15 saacadii
Waxaa jira baahi badan oo loo qabo fadhiisiyeyaasha xayawaanka rabaayada ah iyo milkiilayaasha xayawaanku waxay rabaan inay ogaadaan xayawaankooda inay ku jiraan gacmo la aamini karo. Milkiilayaal badan ayaa ku qanacsan inay ka tagaan xoolahooda keligood maalin dhan, laakiin kuwa kale waxay doorbidi lahaayeen inay xayawaankooda helaan shirkad.
Xayawaanka la fadhiyo waxay qaataan mas'uuliyadda ka ilaalinta shirkadda xayawaanka marka milkiilayaashoodu ay shaqada ku jiraan ama ay maqan yihiin iyagoo booqanaya oo joogaya guriga dhowr saacadood. Xirfadda fadhi-ku-dirirku waa ay korodhay sannadihii u dambeeyay, waxaana jira dhowr siyaabood oo aad khibrad u heli lahayd oo aad uga shaqayn lahayd sidii aad u noqon lahayd ganacsi dhisan.
Lahaanshaha xoogaa waayo-aragnimo ah daryeelka xayawaannada gaarka ah waxay noqon doontaa faa'iido laakiin ma jirto tababar rasmi ah oo loo baahan yahay si aad u noqoto khabiir ku takhasusay xayawaanka.
Celceliska mushaharka: $12 ilaa $16 saacadii,
Xannaanaynta dhallaanku waxay bixisaa fursad ku habboon iyo meel aad wax ku barato iyadoo la helayo lacag dheeraad ah. Ilmo-ilaaliyeyaal waxaa shaqaaleysiiyay qoysas si ay u kormeeraan carruurta fiidkii ama maalmaha fasaxa inta ay waalidiintu maqan yihiin.
XIDHIIDHKA: 10 Software Maareynta Document -ka ugu Fiican 2022 -ka
In kasta oo ay tahay shaqo aan is-waafaqsanayn, haddana marka qoys lagu shaqaaleysiiyo oo ay kugu faraxsan yihiin, waxay caadi ahaan mar kale ku isticmaali doonaan oo ay kuu gudbin doonaan qoysas kale. Tani waxay la macno tahay, ka go'naan, waxaad ku kasban kartaa si wanaagsan markaad dhisto liiska shaqada xannaanaynta joogtada ah.
Celceliska mushaharka: $12 saacaddii socod-dheer
Socodka eyda waa ganacsi faa'iido badan leh, maadaama dadka leh eeyo badan ay u baahan karaan adeegyada eyda socota dhawr jeer maalintii.
Inta badan mulkiilayaasha xayawaanka ayaa kaliya u tixgelin doona qof la aamini karo oo la isku halayn karo haddii qofkani uu khibrad u leeyahay la shaqaynta xayawaanka oo uu diyaar u yahay inuu ku shaqeeyo mushahar yar.
Socodka eeyaha sida caadiga ah waxaa la siin doonaa furaha guriga milkiilaha haddii ay rabaan inay kaxeeyaan xayawaanka rabaayada ah ugu yaraan saacad maalin kasta.
Akhri: 10ka hantiile ee ugu mushaarka badan USA | Dawladaha Ugu Wanaagsan Hantiilayaasha
Celceliska mushaharka: $25 ilaa $45 maalintii
Guryaha fadhiistay waxa lacag lagu siiyaa dhirta biyaha, xanaaneeyaan xayawaanka rabaayada ah, oo isha ku haya ammaanka hantida inta ay milkiilayaashu maqan yihiin.
Shaqaalahani waxa laga yaabaa inay ku noolaadaan guriga maalmo wakhtiba mar, taasoo siinaysa mulkiilaha guriga xasilooni maskaxeed.
Dhaqankan ayaa ah mid aad loo bixiyo sababtoo ah mulkiilayaashu waxay kaydin karaan lacagta khidmadaha guryaha ama hoos u dhigida amniga inta ay maqan yihiin, waxayna dareemaan ammaan inay ogaadaan in qof uu ilaalinayo gurigiisa haddii ay ku jiraan waxyaabo qaali ah ama laga yaabo inay u nugul yihiin tuugo.
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka mushaharka sare leh ee dhalinyarada.
7. Jardiinada Muuqaalka
Celceliska mushaharka: $12 ilaa $18 saacadii
Fursadaha loogu talagalay dhalinyarada xiisaynaysa naqshadaynta dhulka waxaa ka mid ah inay u shaqeeyaan shirkadaha dhirta. Naqshadaynta dhulku waa shaqo jidh ahaan u baahan, una baahan fiiro gaar ah oo faahfaahsan iyo ixtiraamka hantida macaamiisha.
Sawir-qaadaha waxay kasbadaan mushahar sare sababtoo ah dadaalka jireed ee looga baahan yahay shaqadooda, kaas oo ku lug yeelan kara beddelka ciidda iyo dhulka, goynta cawska, dhisidda jardiinooyinka ama dhismayaasha bannaanka, iyo beerista sariiraha iyo abuur.
Macaamiisha shaqaaleysiiya xirfadlayaasha muuqaalka waxay inta badan ku faanaan guryahooda iyo beerahooda; waxay rabaan qof ka shaqayn doona dayactirka beertooda iyaga oo aan wasakhayn hantidooda ama carqaladayn nolol maalmeedkooda.
Mushaharka celcelis ahaan: $ 15 saacaddii
Inkasta oo qaar ka mid ah goobaha shaqada ee dhismuhu ay dejiyaan da'da mishiinnada ku shaqaynta iyo kaxaynta baabuurta, haddana waxay siiyaan fursado ay dhallinyaradu ku kasbadaan mushahar wanaagsan oo saacadle ah oo caawinaya shaqaalaha goobta.
Mas'uuliyadaha dhalinyarada ee goobaha dhismaha waxaa ka mid noqon kara rarista baabuurta, jiheynta baabuurta iyo kuwa xamuulka qaada ee goobta iyo ka baxaba, iyo dhaqaajinta carro ama qalab kale.
Celceliska mushaharka: $11 ilaa $15 saacadii
Kaadiyada Golf-ka si fiican ayaa loo bixiyaa, iyadoo la tixgelinayo shaqadooda inta badan ay tahay gacanta oo ay ku jiraan saacado badan. Inta badan waa ardayda dugsiga sare ee qaata shaqada caddy si ay u helaan lacag ay ku maalgeliyaan waxbarashadooda.
Shaqadu waxay kaliya u baahan tahay inaad jacayl u qabto ciyaaraha iyo fahanka wanaagsan ee golfka.
Akhri: Lacag ma lagugu siiyaa sidii Dabdemis Tabaruc ahaan?
Celceliska mushaharka: $11 ilaa $18 saacadii
Dhallinta jecel dabaasha, ilaalinta naftu waxay u noqon kartaa hab fiican oo lacag lagu sameeyo. Tababarka ka dib, ilaalinta nafleyda ayaa baahi weyn loo qabaa, saacado badana waa joogto oo inta badan waxay ku haboon yihiin fiidkii ama sabtida.
Inta ay shaqada ku jiraan, badbaadayaashu waxay badiyaa fursad u helaan inay tababaraan dabaasha da'da yar, iyagoo helaya waayo-aragnimo qiimo leh oo u horseedi karta xirfad tababarnimo ama waxbarid isboorti.
Celceliska mushaharka: $20 ilaa $40 saacadii
Ardayda ku guulaysata waxbarashadooda waxay heli karaan lacag macalinimo ahaan - sababtoo ah waalidku waxay rabaan inay caruurtoodu ku fiicnaadaan dugsiga, waxayna bixinayaan kharashka tan si ay u dhacdo.
Baahida macalimiin ayaa aad uga sareysa sidii hore iyadoo dugsiyo badan oo dhexe la xiray 2020, taasoo keentay in waalidiinta qaar ay qortaan macalimiin si ay ula jaan qaadaan waxbarashada seegtay.
XIDHIIDHKA: Immisa ayuu ku kacayaa Duulimaadka Ambalaaska Hawada?
Fikradda Dhallin-yarada waxay bixisaa abaal-marinno la wadaaga fikradahaaga summadaha, alaabta, iyo adeegyada. Ka jawaab sahamin fudud oo ku hel kaararka hadiyadda. Imisa Ayaad Kasban Kartaa? Awoodda kasbashada adiga ayay kugu xiran tahay. 50-100$ bishii
Haddii aad karti u leedahay tafatirka fiidyaha iyo indho hal abuur leh, waxaad isticmaali kartaa xirfadahaaga si aad dakhli uga samayso internetka. Alaabooyinku waxay noqdeen dhijitaal, laakiin wali waxaa jira baahi loo qabo tifaftirayaasha kuwaas oo qaadi kara muuqaal cayriin oo ka dhigaya mid dhalaalaya oo soo jiidasho leh.
Imisa Ayaad Kasban Kartaa? $75-$150 saacadii. Sidee loo Bilaabaa? Tababarku wuxuu kaamil ka dhigaa! Qaado koorsada ama baro xadhkaha adoo u hagaajinaya fiidiyowyada asxaabta, qoyska, ama ganacsiyada.
$25 ilaa $50 ciyaartiiba
Waxaad heli kartaa dakhli dheeraad ah sida garsoore ciyaaraha dhalinyarada haddii aad tahay ugu yaraan 12 sano. Caadi ahaan waxaad shaqayn doontaa 30 daqiiqo ilaa 2 saacadood ciyaartiiba, ciyaaruhuna waxay socon karaan dhawr daqiiqo oo kaliya ama ilaa 3 saacadood.
Isboorti kasta oo aad qabato, waxaad u baahan doontaa inaad xidhato dirays, oo aad siddo calan iyo kaar-xadhig, la soco wakhtiga, oo aad foori (xaladaha qaarkood) yeelato.
$ 7.73 ilaa $ 12.74 saacaddii
Waxaad u shaqayn kartaa sidii lataliye deegaan xagaaga ama xilliyada munaasabadaha gaarka ah waxaadna ku raaxaysan kartaa kharashyada nolosha, cuntada, iyo nashaadaadka madadaalada adigoo qaadanaya mushahar ka sarreeya inta ugu yar.
$ 12+ saacaddii
Haddii aad jeceshahay nadiifinta iyo dhar-dhaqashada, waxaad samayn kartaa lacag sidii guri ilaaliye ama shaqaale shaqaale ahaan. Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqada, shaqaalaha guryaha ee ka shaqeeya hoteelada waxay helaan celcelis ahaan $12.19 saacadii iyadoon tabo lahayn.
Meelaha kale ee looga shaqeeyo guri ilaaliye ahaan waxaa ka mid ah isbitaalada, xarumaha daryeelka kalkaalinta, iyo bulshooyinka hawlgabka daryeelka joogtada ah. Kuwani waxay bixiyaan $11.80 ilaa $13.90 saacaddii celcelis ahaan.
$8 ilaa $21+ saacadii
Darawalada geynta cuntada waxay kasbadaan mushahar dhexdhexaad ah oo saacadii ah $14.28, marka loo eego PayScale. Dabcan, taasi waa celceliska heerka, waxayna noqon kartaa mid sare u kacda qaar ka mid ah shaqaalaha iyo ka hooseeya kuwa kale.
$13.84 ilaa $19+ saacadii
Haddii aadan waxba ka qabin shaqada gacanta, ka shaqaynta shirkad rinjiyeynta guriga xagaaga iyo maalmaha fasaxa ayaa si fiican u bixisa. PayScale ayaa sheegaysa in rinjilayaasha leh wax ka yar hal sano oo waayo-aragnimo ah ay helaan celcelis ahaan $13.84 saacaddii.
$12 ilaa $16+ saacadii
Dhalinyaro xoog badan oo taxaddar leh oo ku filan inay si badbaado leh u raraan walxaha waaweyn oo si taxadar leh ula shaqeeyaan waxay samayn karaan celcelis ahaan $ 13.58 inay u shaqeeyaan shirkad guuraysa.
Shaqadani waxay u fiican tahay dhalinyarada da'doodu tahay 18 ama 19 sababtoo ah shirkado badan ayaa leh xaddidaadyo da'da.
Akhri: WAA KUMA SALMANKA LACAGTA UGU SAREEYA? TOP 10 ILAALINTA GADIIDKA BAABUURTA
Mushaharka celceliska qaranka: $ 10.55 saacaddii
Qasnajiga waajibaadkiisa aasaasiga ah waa inuu soo wacdiyo iibka macaamiisha oo uu dhamaystiro nidaamka hubinta. Tan waxaa ka mid ah lacag-ururinta, xaqiijinta kuubannada ama kaadhadhka hadyada, hubinta saxnaanta qiimaha, iyo alaabta boorsooyinka.
Mushaharka celceliska qaranka: $ 11.00 saacaddii
Jilayaashu waxay bartaan qoraalka, bartaan khadadka ay ku shaqeeyaan oo waxay ka qaataan jihada agaasimayaasha. Haddii aad ku raaxaysato jilitaanka, ka qayb qaado soo saarista tiyaatarada dugsiga ama deegaanka si aad khibrad dheeraad ah u hesho oo aad u dhisto resume ka hor intaadan raacin door jilitaan oo mushahar leh.
Mushaharka celceliska qaranka: $ 11.06 saacaddii
Shaqada saaxiibka iibka waa inuu caawiyo macaamiisha soo galay dukaankaaga. Waa inaad weydiisaa macaamiisha haddii ay u baahan yihiin wax caawimo ah oo aad hubiso in bakhaarku nadiif yahay, nadiif yahay oo aanay jirin khaanadaha ama khaanadaha qallafsan.
Waa inaad sidoo kale hubisaa haddii macaamiishu ay qabaan su'aalo ku saabsan badeecadaha ama qiimaha.
Mushaharka celceliska qaranka: $ 11.42 saacaddii
Waajibaadka aasaasiga ah ee server-yadu waa ka amar qaadashada macaamiisha, la xiriirida amarada jikada, iyo gaarsiinta cuntada diyaarsan macaamiisha. Adeegayaashu waxay sidoo kale nadiifiyaan miisaska oo dib u dejiyaan casheeyayaasha cusub. Dhammaadka shaqadoodii, adeegayaashu waxa laga yaabaa inay caawiyaan nadiifinta makhaayadda.
XIDHIIDHKA: 10-ka Ciyaaraha Ugu Qaalisan Adduunka
Mushaharka celceliska qaranka: $ 12.72 saacaddii
Baayacmushtar tafaariiqeedku waa iibiye u shaqeeya shirkad wax soo saarta oo u shaqeysa sidii isku xidhka u dhexeeya saaraha iyo tafaariiqle.
Waajibaadkooda waxaa ka mid ah ilaalinta heerarka saamiga ugu wanaagsan, dhigista calaamadaha dukaamada iyo qiimaha badeecadaha, iyo abuurista xeelado iibinta calaamadahooda tafaariiqda. Waxay sidoo kale tababaraan shaqaalaha hawlahan.
25. Farsamoyaqaanka baabuurta
Mushaharka celceliska qaranka: $ 19.55 saacaddii
Farsamayaqaanka baabuurta ayaa mas'uul ka ah hagaajinta, dayactirka, iyo kormeerka baabuurta. Qofka booskan ku jira waa inuu sameeyaa dayactir joogto ah iyo baaritaanno ogaanshaha, baabuurta lagu tijaabiyo iyo inuu ilaaliyo diiwaannada saxda ah ee macaamiisha.
Tani waxay noqon kartaa shaqo aad u fiican oo la sii wado haddii aad khibrad u leedahay inaad ku shaqeyso baabuurta wakhtiga firaaqada.
26. Kaaliyaha maktabadda
Mushahar saacadeedka qaranka: $13.28
Mawqifka kaaliyaha maktabadda ayaa ku arki doona adiga oo ka caawinaya xubnaha dadwaynaha si ay u helaan buugaag. Hawlaha kale ee laga yaabo in lagu weydiiyo inaad dhammaystirto waxaa ka mid ah ka caawinta shaqaalaha maktabadda inay ururiyaan liisaska alaabada iyo kaydinta buugaagta loo isticmaalo ujeedooyinka kaydinta.
Akhri: Waa Kuwee Dukaameystayaasha Dahsoon Ee Lacagta Ugu Badan Bixiya? | 15 Shirkadood ee ugu Fiican 2022
Baristas waxay ka shaqeeyaan dukaamada qaxwada si ay u helaan $12.59 saacadii iyagoo salaamaya macaamiisha, diyaarinta iyo u adeegida cabitaanada (aan khamriga ahayn), iyo ilaalinta nadiifinta dukaanka.
28. Kaaliyaha Bakhaarka
Mushahar saacadeedka qaranka: $10.54
Waxaad ku quudin doontaa, ku qubaysan doontaa, oo dawayn doontaa xoolaha meelo gabbood iyo xarumo caafimaad oo kala duwan. Jagooyinkani waxay inta badan leeyihiin isdhexgalka bini'aadamka oo xaddidan - marka laga reebo markaad la hadlayso macaamiisha.
Waxa kale oo loo yaqaan processor-yaasha, kala-soocida oo iskaan-baarka xidhmooyinka si loo keeno. Mushaharka dhexdhexaadka ah ee saacadiiba booskan waa $14.66.
Ku samee ku dhawaad ​​$9.00 saacadii hawlaha sida iibinta tigidhada, ku socodsiinta goobta cuntada fudud, ama nadiifinta ka dib markay martidadu tagaan. Tigidhada filimada ee bilaashka ah ama jaban sidoo kale waa faa'iido.
Ma noqon kartaa 14 oo ma ka shaqayn kartaa McDonald's?
Waa inaad tahay 14 jir ama ka weyn si aad uga shaqeyso xubin Crew ah McDonald's. Bilaabida Mushaharka 18 sano iyo ka weyn: ilaa $13/HR.
14 jir ma ka shaqayn karaa Starbucks?
Si aad ugu shaqeyso Starbucks waa inaad ahaataa ugu yaraan 16 jir (marka laga reebo Montana oo da'da ugu yar ay tahay 14 jir). Boosaska tafaariiqda ee aad ka dalban karto Starbucks waa Baristas iyo Kormeerayaasha Shift. Starbucks sidoo kale waxay bixisaa tababaro yar, waxayna siiyan shaqaalaha jira ka hor dadweynaha guud ahaan.
Da'dee ayaad ka shaqayn kartaa Dunkin?
Si aad uga shaqeyso Dunkin'Donuts waa inaad ahaataa ugu yaraan 16 jir. Jagooyinka suurtogalka ah waa xamaali, xubnaha shaqaalaha, caawimada miiska, lacag-hayaha, hogaamiyaha shaqada/kormeeraha, kaaliyaha maareeyaha dukaanka, ama xitaa maareeyaha makhaayadda. Bakhaar kastaa wuxuu leeyahay shuruudo ka duwan boos kasta.
Da'dee ayay Claire shaqaalaysaa?
Waa inaad tahay 16 jir ama ka weyn si aad ugu qalanto shaqaaleysiis ahaan Iskaashatada Iibka ee Claire's.
Hadda oo aanu ku siinay qaar ka mid ah talooyin ku saabsan shaqo u helida dhalinyarada, waa waqtigii la dhamayn lahaa! Waxaan rajeyneynaa in maqaalku uu ahaa mid faa'iido leh oo aad ka heli karto wax xiiso leh halkaas.
Siyaabaha ugu wanaagsan ee shaqo loogu heli karo dhalinyarada waa Google iyo goobaha shaqada sida Indeed.com iyo Snag.com.
Shaqooyinka ku qoran boggaan, waxaad ka raadin kartaa shaqo "xagaaga dhalinyarada" ama "shaqo fog", ama isticmaal ereyada muhiimka ah sida "dhallinyarada" iyo "fog fog" haddii aad rabto inaad shaqo u hesho dhalinyarada online.
shaqada Wiki - Shaqooyinka ugu mushaharka badan-dhalinyarada
Shaqooyinka hooyada la isku dayay oo run ah - Shaqooyinka dhalinyarada
Daynta ka cafinta ardayga - shaqooyinka ugu mushaharka badan-dhalinta
Dhab ahaantii - Shaqooyinka-mushaharka sare leh-dhallinyarada
Novo resume - shaqooyin-loogu-dhalinyarada
Waa kuma Architect -ka ugu mushaarka badan | Xirfadaha Dhismaha ee Mushaharka ugu sarreeya ee 2022
20 Siyaabood Oo Lacag Laguugu Siinayo Inaad Raadisid Shabakadda 2022 | Samee $ 3000/Bishii
10ka Qareen ee ugu Mushaharka Badan Mushaarka Sanadka 2022 | Dalalka Ugu Fiican
Lacag ma lagugu siiyaa sidii Dabdemis Tabaruc ahaan?
20 talo oo loogu talagalay iibsadayaasha guryaha markii ugu horeysay
SIDA LOO HELO DHISMAHA ARDAYGA PREMIUM EE YOUTUBE 2022
Waxaad ku baran doontaa sida loo helo qiimo dhimista ardayda YouTube ee maqaalkan. Sida aan wada ognahay,…
20 Fikradaha Wargeys Xagaaga ee Ugu Fiican 2022
Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa 20ka fikradood ee wargeysyada wakhtiga xagaaga ugu fiican. Aragtida dadweynaha ee sumad kasta ayaa go'aamin doonta sida isticmaalayaashu…
21 Xirfadaha La Taaban Karo ee Aan Sannadkan Wax Lagu Baran
Mid ka mid ah astaamaha ugu weyn ee dadka guuleysta waa inay leeyihiin xirfad. Hadday tahay mid wax ku ool ah ama hal abuur leh…
Maxay ka dhigan tahay Markaad ku riyootid qof dhimanaya? 15 Xaqiiqo Oo Ku Saabsan Riyada Geerida
Riyooyinka waxaa badanaa loola jeedaa in ay u adeegaan si looga baxsado xaqiiqada si qoto dheer loogu dhex galo adduunka…